Ogaden News Agency (ONA) – Hailemariam Desalegn ma yeelan doonaa shaqsiyad u gaar ah sidii Anwar sadat
Hailemariam Desalegn ma yeelan doonaa shaqsiyad u gaar ah sidii Anwar sadat
Posted by ONA Admin	/ May 15, 2013
Siyaasiga ugu nasiibka daran waa midka si kadis ah oon la filaynin ugu fadhiista kursigii uu ku fadhiisan jiray shaqsi taariikh ku leh dalka ama maamulka (administration) uu dhexlay. R/wasaaraha Itobiya Hailemariam Desalegn xaalad adag ayaa haysata. Wuxuuna ku fahmi karaa qofka doonaya inuu wax un ka ogaado xaaladda adag ee Hailemariam uu ku sugan yahay inuu dib u yarehe jaleeco xaalad u dhiganta middan uu ku sugan yahay. Soo Noq-noqotka Taariikhda (History Recurrence) waxaa ka mid ah isku ekaanshaha wadada ay mareen siyaasiyiintii ay soo wajahday xaaladda uu ku sugan yahay Hailemariam Desalegn.
Madaxweynihii dalka Masar Jamal Cabdi Naasir wuxuu ahaa shaqsi taariikhi ah oo dalkiisa iyo caalamkaba kaga tagay raadad muuqda. Wuxuu ahaa M/W ay aad looga jecelyahay dalkiisa iyo guud ahaan dalalka Carabta. Wuxuu ka mid ahaa 5tii M/weyne ee asaasay Dhaqdhaqaaqii la odhan jiray Dawladaha Dhex-dhexaadka ( Non Aligned Movement NAM). Wuxuu ka mid ahaa asaasayaashii Midowga Afrika. Wuxuu aad u taageeri jiray gobanimadoonadii dalalka carabta iyo Afrika iyo guud ahaan Dunida 3xaad. Wuxuu ahaa shaqsi culays ku leh saaxada aduunka oo si aad ah loo tixgaliyo. Markii lagu jabiyay ciidankiisa dagaalkii sida kadis ah ay Yuhuuda ugu soo qaadeen 1967kii oo laga qabsadey dhamaan gobolka Sinai, wuxuu ku dhawaaqay inuu masuuliyaddaa qaaday wuxuuna iska casilay M/weyninimadii. Shacabkii Masar markay maqleen arintaa boqolaal kun iyagoo ah ayay soo baxeen waxayna ku qasbeen Jamaal Cabdinaasir inuu ka noqdo is-casilaada haddii kale aanay dib ugu noqonaynin guryahoodii. Sidii ayayna noqotay. Laba sano ka dibna wuu geeriyooday Jamal C.naasir isagoo aad loo jecelyahay.
Sanad ka hor intuuna geeriyoonin ayuu si lama filaan ah ugu magacaabay M/weyne ku xigeen Anwar Saadat oo ka mid ahaa saraakiishii wax ka dhigay afgambigii lagu sameeyay Boqorkii Masar. Anwar Sadaat wuxuu ahaa nin qunyar socod ah oon lahayn hanweyn oo u muuqda inuu doonayo xukunka inuu kaga dambeeyo Jamaal Cabdinaasir, inkastoo uu ka mid ahaa ragga uu ku kalsoonyahay, hasa ahaatee kama mid ahayn saraakiishii la filayay inay ku-xigeen u noqdaan Jamaal Cabdinaasir. Waxaa M/w loo magacaabay 1970, iyadoo sawirka laga haysto Anwar Saadaat ay tahay inuu yahay ku-sime mudda yar un sii haynaya inta ay ku heshiinayaan xukunka Qamaamiirta. Isagoo arimahaa la socda iyo sida shacabka Masar ay u raacsan yihiin Cabdinaasir ayuu khudabadii ugu horeysay uu akhriyo Sadat wuxuu ku sheegay inuu sii wadayo siyaasadii Cabdinaasir. Wuxuu yidhdi; Waxaan aamimnasanahay sababta aad iigu doorateen jagada M/weynenimada inay tahay in aan ku taagnaado wadadaii Cabdinaasir .. (I believe that your nomination of me to assume the responsibility of the Presidency is a nomination for me to continue the path ofNasser”).
Waxaase la yaab ku noqotay qofkasta talaabooyinka uu qaaday Sadat muddo yar ka dib. 15kii May 1971 wuxuu ku dhawaaqay sadat wuxuu ku magaacabay –Kacaan Sixitaan ah (Corrective Revolution), wuxuuna ka sifeeyay xukuumadda iyo haya’adaha Amniga dhamaan dadkii sida aadka ah u taageersanaa Jamal cabdinasir (ardent Nasserites). Waxaa ku xigtay talaabooyin kale oo geesinimo leh sida inuu ooda ka qaado dhamaan maxaabiistii siyaasidda u xidhnaa isla markaana uu fasaxo ururadii diiniga ah ee qunyar socodka ahaa sida Akhwaanul Muslimiin oo Jamal Cabdinasir uu xabsiga wada dhigay. Wuxuu halkaa ku dhisay qaacidda siyaasi ah oo taageersan isaga isla marahaantaana ka soo horjeeda fikirkii Naasiriga oo kuwa xukunka uu damaca kaga jiro ay aaminsanaayeen. Laga bilaabo waqtigaa wuxuu jeexday wado cusub oo ka soo horjeeda gabi ahaanba siyaasadii Cabdnaasir. Wuxuu eryay Midowgii Sofyetka oo ahaa saaxiibka ugu dhow Masar, wuxuuna furfuray dhaqaalihii dalka. Guusha ugu weynee uu helayna waxay ahayd dagaalkii 1973gii uu ku qaaday si aanay marnaba filaynin Yuhuuda oo uu kaga kiciyay difaacii ay ka dhiseen daanta Bari ee Sues Canal ee loo yaqiinay Kahdkii Barleef (Bar Lev Line). Wuxuu halkaa ku helay sumcad balaadhan oo muujisay inuu yahay shaqsi kaligii taagan oon hoos fadhiyin hadhkii Jamal Cabdinasir.
Intaa hadaan ku soo koobno taariikhda Sadat, waxaan odhan karnaa isku ekaansho badan ayaa ka dhexeysa labada siyaasi Sadat iyo Hailemariam Desalegn habkay ku yimaadeen xukunka. Inkastoo taariikhda umadaha ayna ahayn Koobi (carbon copy), hadana marinada ay siyaasiyiinta ka gudbaan waxyaaba badan ayaa ka dhexeeya.
R/W Hailemariam taariikhdiisii hore lamid maha Anwar Sadat, oo sida Sadat uu ula soo hanaqaaday taariikhda Jamal Cabdinasir iyo Saraakiishii Xorta ahayd (Free Officers) ee inqilaabay boqorka, kama mid ahayn Hailemariam Desalegn dagaalyahankii TPLF ee soo dagaalamay ilaa ay ka eryaan xukunka Mingisto Hailemariam. Waxaa soo qaaday Meles Zanawi oo ku badalay Abate Kisho oo ahaa M/weynaha Gobolada Koonfureed markuu la saftay kooxdii TPLF ee ku kacsanaa Meles ee laga adkaaday.
Marka laga yimaado kala dawanaanshahaa oo aan waxbadan ka badalaynin geedisocdka taariikhda R/W Hailemariam Desalegn, waxay iska shabahaan habka labadooda loo magacaabay oo ahaa mid aan laga filaynin Jamal Cabdinasir iyo Meles Zanawi. Sidoo kale waxay isku raaceen khudabadaha ay akhriyeen labadooda markii la magacaabay oo midwalba uu yidhi suu u helo kalsoonida shacabka; waxaan ku soconayaa khadkii Hogaamiyihii iga horeeyay. R/Wasaare Desalegn iskama wada kaloo u furnayd ma jirin marka la eego habka ay TPLF u buun-buuniyeen taariikhda Meles Zanawi markii la soo sheegay inuu dhintay oo gabi ahaanba shacabka lagu qasbay inay baroortaan.
Waxaan soo sheegnay sooyaalkaa ka dib, inuu Sadat qaaday talaabo aan laga filaynin oo sifayn ah 1971 suu u hirgaliyo mashruuc isaga u gaar ah oo uu uga hoos boxo hadhka Jamal C.Nasir. Arinta R/W Hailemariam Desalegn halkan ayay hadda mareysaa, waxaana la sugayaa siduu u noqon lahaa qof gooni u taagan oo leh shaqsiyadiisa gaarka ah.
maxamed cadde says:
waa sidaa aad u sheegtaye waxaa muuqda inuu H/Marian uu billaabey tillaabooyin geesinimo ku jirto o ku sifeynayo kuwa ku qaraabta shaatiga meleze zenawi sida g/waaxid iyo Malaku waxaan filnaaba waa iley iya Abraham walde